Bajao (vahoaka) - Wikipedia
Fonenam-Baja any Filipina
Vehivavy Bajao manao fitafiana nentim-paharazana, miomana handray ny filoham-panjakaana
Faritra misy ny Sama-bajao: faritra miloko maitso
Ny Bajao na Bajô na Sama-Bajao vondrom-poko any Broney, any Indônezia, any Malezia Atsinanana ary any Filipina, izay isan' ny vahoaka atao hoe mpifindrafindra monina an-dranomasina toy ny Môkena any Birmania sy Tailandy, ny Ôranga Laota (Orang Laut) any Riau sy ny Oraka Laoy (Urak Lawoi) any Tailandy. Laharana faharoa ny Bajao amin' ny habetsahana ao amin' ny Fanjakana malzianan' i Sabah, ka mahatratra ny 13 %n' ny mponina ao. Ny Bajaon' i Indônezia dia miaina indrindra eny amin' ny nosy madinika sy ny morontsiraky ny nosy Sulawesi (na Célèbes). Heverin' ny maro fa ny fanjonoana sy ny fanaovana raharaham-barotra ny zanga (trepang amin' ny fiteny maley) no mitarika ny fielezan' ny Bajao.
1 Fomba fiainana
1.1 Mpifindrafindra monina an-ranomasina
1.2 Mpanao ankisitrika anaty rano
1.3 Ny sakafo
Fomba fiainana[hanova | hanova ny fango]
Mpifindrafindra monina an-ranomasina[hanova | hanova ny fango]
Tsy mahari-monina amin' ny toerana iray ny Bajao fa mifindrafindra.
Ny fanambanin' ny lakana hazo dia misy varavarana izay sokafany mba hahafahany mametraka ny sofiny amin' ny ranomasina hihainoany ny feo avoakan' ny trondro sady hahafantarany ny fihetsiky ny fanambanin' ny ranomasina vokatry ny horohoron-tany. Tsy fitaovam-pitaterana fotsiny ny lakana fa toerana iankinan' ny aina izay tokony harovana sady maha izy azy ny Bajao. Inoan' ny Bajao ho manana hery tsy hita maso ny lakana. Tsy natao handehanana amin' ny ranomasina manonja be anefa ny lakan' ny Bajao.
Manana trano kely manan-tongotra miorina akaikin' ny toeram-panjonoana koa ny Bajao, izay miaro azy raha misy ny rivo-mahery.
Mpanao ankisitrika anaty rano[hanova | hanova ny fango]
Zaza sama-bajao any Sama-Bajau ao Basilan, any Filipina
Manam-pifandraisana lalim-paka amin' ny ranomasina ny Bajao. Vao telo andro monja ny nahaterahan' ny zazamena bajao dia efa atsoboka ao anaty rano ka tsy ela aorian' izay dia lasa mpilomano mahay. Afaka midina any anaty ranomasina hatrany amin' ny 70 m ny olon-dehibe mpanao antsitrika.
Afaka midina any anaty ranomasina koa ny vehivavy raha manjono, na dia bevohoka aza. Ny fikarohana navoaka tao amin' ny gazetiboky Cell dia nampahalala ny fiovana mahazo ny taranaka indrindra ny fihalehibeazan'ny sarakaty, izay mahatonga ny Bajao ho afaka miaina any atay ranomasina lalina dia lalina. Ireo Bajao mpanao ankisitrika dia tsy mitsahatra ny mampitombo ny fahafahany misitrika tsy misefo anaty rano mandritra ny 13 mn hatramin' ny 60 m any ambany ranomasina.
Ny sakafo[hanova | hanova ny fango]
Tsy mihinana afa-tsy trondro ny Bajao. Ampiany vary na voan-kazo hitany any anaty ala mikitroka izany.
Ny fiteny sama-bajao (fiteny bajao indôneziana sy fiteny bajao amin' ny morontsiraka andrefana) dia ao amin' ny zana-bondrom-piteny atao hoe fiteny solo-bôrneô isan' ireo fiteny sama-bajao izay heverina ho vondrona ao amin' ny sampa-madiniky ny fiteny baritô lehibe ao amin' ny sampana malaiô-pôliezianan' ny fianakaviam-piteny aostrôneziana.
Isan' ireo fiteny sama-bajao sady ahitana endrika isam-paritra maro ny fiteny sama: ny fiteny iakàna, ny fiteny sama avaratra, ny fiteny sama afovoany, ny fiteny sama atsimo, ny fiteny sama pangotaràna, ny fiteny bajaon' ny morontsiraka andrefana sy ny fiteny bajao indôneziana.
Miozolmana ny ankamaroan' ny Bajao. Fifangaroan' ny silamo sy ny animisma ny fivavahany. Atao hoe Setan, izay mamoaka ny tsara sy ny ratsy, ny andriamanitra ivavahany. Ny ombiasa (shaman) izay mety ho vehivavy, dia manana anjara asa maro; mpitsabo, mpitoka ny fanahin' ny maty, manam-pahefana ara-pitondran-tena ao amin' ny foko misy azy, mpampivelona. Raha misy fihaonana amin' ny vahiny dia ny ombiasa (shaman) no mpanelanelana. Satria izy ireo heverina fa mpitana ody mahery dia matetika no atoka-monina tsy hifangaro amin' ny olon-tsotra.
Bajao hoe ny Vezo eto Madagasikara?
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Bajao_(vahoaka)&oldid=1013543"
Voaova farany tamin'ny 10 Aogositra 2021 amin'ny 10:43 ity pejy ity.